Home Wararka Sirdoonka Maraykanka oo sheegay in Soomaaliya ka soo socoto khatar argagaxiso
Sirdoonka Maraykanka oo sheegay in Soomaaliya ka soo socoto khatar argagaxiso
“Marka la eego dalkeen, halista hadda ka imaanaysa kooxaha argagaxisada, Afghanista kuma jirto liiska ugu sarreeya,” ayay tiri. Waxa ay intaas ku daratay, “Waxa aan eegno waa Yemen, Soomaaliya, Suuriya iyo Ciraaq oo loogu talagalay ISIS. Waana meesha aan ku aragno halista ugu weyn. ”
20 sano ka dib weeraradii argagixiso ee Sebtember 11, 2001, Haines waxay sheegtay in ay hanjabaadda ka imaaneya kooxaha Islaamiyiinta ah ay si weyn hoos ugu dhaceen. Agaasimaha sirdoonka Maraykanka waxay sheegtay in dadaal aad u weyn oo ka socda Mareykanka uu keenay in aad loo yareeyo awoodda ay kooxaha Alqaacida iyo ISIS weeraro uga geystaan gudaha Mareykanka.